LA OGAADAY: Lacagta Waalida Ah Ee Uu wakiilka Joao Felix Ee Jorge Mendes Uu Ka Helay Iibka Xidigan Oo La Ogaaday. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 17, 2019 at 18:50 LA OGAADAY: Lacagta Waalida Ah Ee Uu wakiilka Joao Felix Ee Jorge Mendes Uu Ka Helay Iibka Xidigan Oo La Ogaaday.2019-06-17T18:50:08+01:00 CAYAARAHA
Warbaahinta Spain ayaa xaqiijisay in kooxda Atletico Madrid ay ku guulaysatay tartankii kooxaha badani ugu jireen da’yarka kooxda Benfica iyo xulka Portugal ee Joao Felix waxayna kooda Simeone bixinaysaa lacagta heshiiska 19 sano jirkan lagu burburin karo.
Laakiin waxaa la ogaaday lacagta waalida ah ee uu wakiilka da’yarka Joao Felix ee Jorge Mendes uu ka heli doono marka la dhamaystiro saxiixa xidigan taas oo muujinaysa in uu jiri karo lahaanshe dhinac saddexaad taas oo UEFA iyo FIFA mamnuuc ka ah.
Boqolkiiba 30% lacagta lagu iibiyo Joao Felix waxaa jeebka ku shuban doona wakiilka kubbada cagta aduunka ugu saamaynta badan ee Jorge Mendes taas oo la micno ah in uu 36 kun oo yuro ka heli karo lacagta heshiiska 19 sano jirkan lagu burburin karo oo 120 milyan yuro ah.
Haddii ay kooxda Atletico Madrid noqoto iyo haddii ay koox kale noqotoba waxa uu wakiilka Jorge Mendes heli doonaa boqolkiiba 30% ka mid ah lacagta da’yarkan reer Portugal ay ku iibinayso Benfica.
Atletico Madrid ayaa doonaysa in ay lacagta Antoine Griezmann oo dhan ku maal galiso la soo saxiixashada da’yarka Joao Felix waxayna labada xidiga iskaga mid yihiin lacagta heshiiskooda lagu burburin karo.
Laakiin kooxda Benfica ayaa war rasmi ah oo ay soo saartay hadda ku beenisay in ay wali heshiis dhamaystiran la gaadhay kooxda Atletico Madrid waxayna maamulka Benfica ku doodeen in ilaa inta si buuxda loo bixiyo lacagta heshiiska Felix lagu burburin karo in aanu jirin doonin heshiis ay galayaan.
Warbaahinta Spain ugu caansan ayaa xaqiijiyay in wakiilka Jorge Mendes iyo qoyska da’yarka Joao Felix ay kooxda Atletico Madrid u doorteen kooxda ugu haboon ee uu horumarkiisa ka sii wadan karo.
Manchester City ayaa diyaar u ahayd in ay bixiso lacagta heshiiska Joao Felix lagu burburin karo laakiin wararka ayaa sheegaya in aan loo damaanad qaadi karin in uu fursad joogto ah ka helayo shaxda kooxda Guardiola.
Joao Felix ayaa isaga oo 19 sano jir ah waxa uu xili ciyaareedkii dhamaaday kooxda Benfica uu u soo dhaliyay 20 gool wuxuuna soo sameeyay 11 gool caawin kadib markii uu saftay 43 kulan.
Si kastaba ha ahaatee, aduunka kubbada cagta ayaa hadda u dhegtaagaya sida ay xaalada Atletico Madrid iyo Joao Felix ay noqon doonto saacaadaha soo socda iyada oo ay Mendes uu mar walba heli doono lacag 36 milyan yuro ah oo boqolkiiba 30% ka ah iibka Joao Felix.
« Qiimaha Tikidhada Finalka UEFA Super Cup Ee Liverpool & Chelsea Oo Lagu Dhawaaqay-Tiro Intee Leeg Ayaa Loo Qorsheeyay?
Qofku markuu dhimanayo, ruuxiisa wuxuu cabaar dhinac yaalayaa meydkiisa »